Huawei ကမိတ်ဆက် P9 နှင့် P9 Plus အားစမတ်ဖုန်းကို iPhone နဲ့ Galaxy အပေါ်ကိုယူမှ - သတင်း Rule
Huawei ကမိတ်ဆက် P9 နှင့် P9 Plus အားစမတ်ဖုန်းကို iPhone နဲ့ Galaxy အပေါ်ကိုယူမှ
အသစ် Dual-camera ကိုဖုန်းများဘို့ Leica နှင့်အတူမြင့်တက်တရုတ်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူမိတ်ဖက်ကထိပ်ဆုံးမှာယှဉ်ပြိုင်ဖို့ကြိုးစားအဖြစ်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Huawei က iPhone ကိုနဲ့ Galaxy အပေါ်ယူ P9 နှင့် P9 Plus အားစမတ်ဖုန်းကိုမိတ်ဆက်” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဧပြီ6ရက်နေ့ပေါ်များအတွက် 2016 13.31 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ Huawei ကစမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီကြီး Samsung နှင့် Apple တို့အပေါ်ယူမှ၎င်း၏နောက်ဆုံးကြိုးပမ်းမှုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်, ၎င်း၏အသစ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်က Android ဖုန်းများနှင့်အတူ dual-ကင်မရာများနှင့်ပရီမီယံဒီဇိုင်းကိုအပေါ်အလောင်းအစား.
အဆိုပါနှစ်ဦးဖုန်းများ, အ 5.2in P9 နှင့် 5.5in P9 Plus အား, ပါးလွှာများမှာ, လူမီနီယံနဲ့လုပ်ထားတဲ့နှင့်၎င်းတို့၏ Corning Gorilla Glass ကို 4-protected ဖန်သားပြင်ပတ်ပတ်လည်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ bezel များ. သူတို့ကဟွာဝေးဘို့ဒီဇိုင်းနှင့်အရည်အသွေးတစ်ဦးခြေလှမ်းတက်ဖြစ်ကြောင်း.
လက်ဝဲဘက်အ 5.5in ဟွာဝေး P9 Plus အား, လက်ျာအပေါ်သေးငယ် 5.2in P9. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ P9 နှင့် P9 Plus အားအလားတူတည်ဆောက်အရည်အသွေးနှင့်အတူတိုင်းနည်းနည်း High-end devices တွေကိုကြည့်ရှု, အစိုင်အခဲခံစား, Samsung နှင့် Apple တို့ကနေထိပ်ဆုံးပစ္စည်းများမှဘုံတက်ကြွဖန်သားပြင်နှင့် fingerprint sensor များ. သူတို့ကအစကြီးမားသောဘက်ထရီများ, microSD card slot, အားသွင်းဘို့ Huawei ၏ထိပ်တန်း-of-the-line ကထုံးစံပရိုဆက်ဆာနှင့်သစ်ကို USB-C ကို connectors.
ဟွာဝေး, သို့သော်, ထိုလူဦးရေထူထပ်ပရီမီယံဈေးကွက်ထဲမှာကိုခွဲထားရန်ကင်မရာကိုစွမ်းရည်အပေါ်ဘဏ်လုပ်ငန်းမှာဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါ P9 ဖုန်းများ dual-ကင်မရာများများ – တစ်ဦး 12-megapixel ကင်မရာအရောင်နဲ့တစ်ဦး 12-megapixel ကင်မရာနှင့်အနက်ရောင်အဖြူ – သောကုမ္ပဏီဖမ်းယူနိုင်ခြင်းဆို 200% ပိုပြီးအလင်း.
မိုက်ကယ် Sykes, Huawei ကအကြီးတန်းဥရောပထုတ်ကုန်မန်နေဂျာ, ကပြောပါတယ်: သင်ပိုမိုအလငျး၌ပါစေလိုလျှင် "သင်ပိုကောင်းနိမ့်အလင်းစွမ်းရည်ရှိ, သင်မူကားလည်းအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဓာတ်ပုံနဲ့အတွက်ပိုမိုမြင့်မားနှိုင်းယှဉ်အချိုးရ, ဒါကြောင့်သင်အမှန်တကယ်ချွန်နှင့်ပြတ်သားအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဓါတ်ပုံရှိသည်နိုင်, သငျတို့သအနက်သတင်းအချက်အလက်များထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ "
Huawei ကထိုကဲ့သို့သောမှာ dynamic ကို aperture ညှိနှိုင်းမှုအဖြစ်အများအပြား features တွေကိုဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်, ဓာတ်ပုံကိုယူပြီး၏ထိုအချိန်ကနှင့်အချက်ကိုပြီးနောက်နှစ်ဦးစလုံး, ကင်မရာများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်နောက်ခံပေါ်တွင်အရောင်တစ်ခုအရာဝတ္ထုသီးခြားအဖြစ်လှည့်ကွက်ချွတ်ဆွဲထုတ်ဖို့စွမ်းရည်နှစ်မျိုးလုံးကို အသုံးပြု.. အဆိုပါစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူဂျာမန်ကင်မရာကိုထုတ်လုပ်သူ Leica နှင့်အတူပူးပေါင်းအတွက် P9 ဖုန်းများအတွက်အသုံးပြုသောအာရုံခံကိရိယာများနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲတီထွင်, သူ့ရဲ့ High-end မှန်ဘီလူးနှင့်ကင်မရာများလူသိများ.
နောက်ကျောအပေါ်လက်ဗွေစကင်နာကိုအိမ်ထောင်ဖက်၏ကိုက်ညီ 8, Google ရဲ့ Nexus ထုတ်ကုန်တပ်ဆင်အသုံးပြုရန်ကြောင့်ဆင်တူ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ဟွာဝေးသော P9 နှင့် P9 Plus အားမျှော်လင့်, အပေါ်ရရှိနိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်သေးငယ်တဲ့အရာ 16 € 599 ဧပြီလ (£ 485) နှင့်ပိုကြီးအဲ့ဒီနောက်သိပ်မကြာခင်မှာပဲ€ 749 များအတွက်, ၏5သန်းနဲ့အရောင်းထက်သာလွန်လိမ့်မည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် P8 နှင့် Huawei ရဲ့ကြီးမားတဲ့-screen ၏3မီတာအအိမ်ထောင်ဖက် phablet 8.
အဆိုပါကုမ္ပဏီတကမ္ဘာလုံးတတိယအကြီးမားဆုံးစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူအဖြစ်အဆင့်, အတွက်တင်ပို့မယ့်ကျော် 104m စမတ်ဖုန်းနှင့်အတူ 2015 နှင့်တစ်ဦး 7.3% စျေးကွက်ပမာဏ, Gartner မှမှအချက်အလက်များအရသိရသည်.
Samsung က၎င်း၏ခဲဆက်လက် 2015 ရောင်းထက်ပို 320m စမတ်ဖုန်းနှင့်အတူ 22.5% စျေးကွက်၏, ရုံအောက်မှာ 226m ရောင်းအားနှင့်အတူ Apple ကဒုတိယနဲ့ 15.9% – ပိုပြီးနှစ်ဆထက် Huawei ၏ရောင်းအား.
အဆိုပါလူမီနီယမ်အလောင်းတွေ, rounded နှစ်ဖက်နှင့်ပါးလွှာသောဒီဇိုင်းကိုပွဲစဉ်ပြိုင်ဘက်. အဆိုပါ P8 Plus အားလည်းထိပ်၌တစ်ဦးမှာ IR blaster ရှိပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
သို့သော်မခွဲခြားဘဲဟာ့ဒ်ဝဲအရည်အသွေး, Huawei ကတရုတ်နိုင်ငံပြင်ပဖြစ်သောကြောင့်၎င်း၏အတော်လေးအမည်မသိအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကုန်းတက်စစ်တိုက်ရင်ဆိုင်နေရ. ကကြီးထွားလာခဲ့ပေမယ့်, Gartner မှ up ပြုလုပ်ရာထူးနှင့်အတူ 1.8% စျေးကွက်ဝေစုနှစ်တွင်-on-နှစျတှငျ, ၎င်း၏ဒေါက်မှာရယူရန်ဆဲတရုတ်နိုင်ငံ၏ Lenovo ကနှင့် Xiaomi ကအတူတစ်ဝေးလံသောတတိယဖြစ်ပါသည်.
Colin Giles, Huawei ၏စားသုံးသူစီးပွားရေးအုပ်စု၏အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပြောသည်: "ကျနော်တို့ကစျေးနှုန်းမှတ်အထိငါတို့လမ်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြရတယ်, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန္ဒက Apple နှင့် Samsung နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ကြောင်း High-end devices များဖန်တီးရန်ဖြစ်ပါသည်.
"ဒါပေမယ့်ငါတို့သည်လည်းအမှတ်တံဆိပ်လိုအပ်ပါတယ်, သောငါတို့သည်တကယ်တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပစားသုံးသူများနှင့်အတူပါဝငျစတင်ရန်တာပေါ့ဆိုလိုသည်။ "
အဆိုပါဟွာဝေး P9 တစ် 5.2in screen ကိုအတူတစ်ဦးကိုဖုန်းများအတွက်အတော်လေး svelte ဘောင်နှင့်အတူလက်၌အငြိမ့်ကိုက်ညီ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ပြဿနာရဲ့အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ဘဲတပါး-to-ဥရောပတိုက်သားအမည်ကား – နှစ်ဦးတရုတ်ဇာတ်ကောင် Hwa-လမ်းအသံထှကျ – သောက၎င်း၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမယ်. Giles said the company was committed to reinvesting its initial successes into above the live advertising and retail, giving the P9apush in smartphone shops.
Huawei P9 Plus is significantly bigger than the P9, witha5.5in screen, but the overall size of the device is still relatively foraphablet. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Huawei က Honor:7ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: လျှပ်စစ်ပြက်-အစာရှောင် fingerprint ကို scanner ကိုအတူ-range ကိုအစိုင်အခဲလယ်ပိုင်း
ဟွာဝေး P8 ပြန်လည်သုံးသပ်: ပိန်သော, အစွမ်းထက်နှင့်ယှဉ်ပြိုင် undercuts
Google Nexus 6P by Huawei review: ရရှိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံး Phablet ကို
Huawei ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: အကောင်းဆုံးကို Android Wear စမတ်နာရီ
28887	8 Android မှာ, အပိုဒ်, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, သတင်း, ရှမွေလသည် Gibbs, စမတ်ဖုန်း
← Logitech သဟဇာတ Elite ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Wacom ဝါး Spark ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း →